How Big Is Australia Compared To Zimbabwe? (Comparison)
Australia is a country located in the Oceania continent, whereas Zimbabwe is a country located in Southern Africa. Today in this article, we will discuss the comparison between Australia and Zimbabwe regarding various aspects.
How big is Australia compared to Zimbabwe?
The total area of Australia is 7,692,024 sq km, and the total area of Zimbabwe is 390,757 sq km. Australia is bigger than Zimbabwe by 7,301,267 sq km. Australia is around 19.68 times bigger than Zimbabwe.
Area of Zimbabwe: 150,872 sq mi ( 390,757 km2 )
Based on the Worldometer elaboration of the latest United Nations data, the total population of Zimbabwe as of 8th July 2021, is 15,086,777.
Here is some more data comparison between Australia and Zimbabwe.
The capital city of Australia is Canberra, and the capital city of Zimbabwe is Harare.
Zimbabwe: There are 16 official languages in Zimbabwe (Source: Wikipedia)
HDI of Zimbabwe as of 2018: 0.571
UTC + 2 (Central Africa Time)
20° 0′ 0″ S, 30° 0′ 0″ E
Australia vs Uzbekistan comparison